Igumbi labucala elinomtsalane kunye nelipholileyo eVilla Punta Cana - I-Airbnb
Igumbi labucala elinomtsalane kunye nelipholileyo eVilla Punta Cana
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguEdgar
UEdgar ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Intle kakhulu kwaye inomtsalane i-villa ene-swimming-pool, itropikhi, icacile kwaye intsha kunye nokuhombisa kwale mihla kunye nefanitshala esemgangathweni, enendawo egqibeleleyo ukuze ube nexesha elifanelekileyo ePunta Cana. Indawo ekhuselweyo 24/7, kufutshane neendawo zeziko, iimarike ezincinci kunye nevenkile enkulu (imizuzu eyi-10 yokuhamba), ulwandle (imizuzu engama-20 uhamba), iivenkile zokutyela kunye nemivalo (imizuzu eyi-10), kunye nesibhedlele esitsha samazwe ngamazwe esinenkonzo ebalaseleyo.
Indlu enkulu enemigangatho emi-2 enamagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2 1/2, igadi, iqula lokuqubha. I-terrace enkulu ekhoyo ye-BBQ, isidlo sakusasa / isidlo sasemini / isidlo sakusihlwa, ubude besitulo kunye nesithunzi. Yonke into yokuba nexesha elifanelekileyo kwiCaribbean! :)
Ikhaya lika-Edgar lisePunta Cana, eLa Altagracia, kwiRiphabhlikhi yaseDominican.
Indawo yokuhlala yabucala kwaye ezolileyo, ebekwe kwindawo entle kakhulu. Umgama omfutshane wokuhamba ukuya kwindlela ephambili e-Bávaro, eya kukunika ukufikelela ngokulula kwezothutho zikawonke-wonke, indawo yokuthenga, iikhemesti, ulwandle, nayo yonke into oyifunayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Edgar
Ndiyakuthanda ukuhlalisana nokuba ndiza kukushiya kwimfihlo yonke. Ndiza kuhlala ndisesandleni sakho xa kukho nantoni na oyifunayo ngokuhlala kwakho. Sinenkampani yezokhenketho yasekhaya ke siya kukunceda ngolonwabo malunga nohambo okanye imisebenzi kule ndawo, okanye nezothutho eziphantsi ukuya ekhaya :)
Sinezinja ezi-2 ezincinci ezithandekayo ezinobuhlobo kakhulu :)
Ndiyakuthanda ukuhlalisana nokuba ndiza kukushiya kwimfihlo yonke. Ndiza kuhlala ndisesandleni sakho xa kukho nantoni na oyifunayo ngokuhlala kwakho. Sinenkampani yezokhenketho yas…